Ndeapi makuru eBay ekutengesa mapoinzi muEurope? | ECommerce nhau
Ndeapi makuru eBay ekutengesa mapoinzi muEurope?
Chidzidzo chakaitwa zvakafanana eBay inotiratidza kuti ndedzipi nzvimbo huru uko vatengesi ve eBay vanoiswa zvakanyanya uye zvavanotengesa EBay yanga ichiongorora matunhu ane huwandu hwakanyanya hwemabhizimusi madiki nepakati kune zviuru gumi zvevagari mu10, iyo data inoratidza kuti kusiyana nemabhizinesi echinyakare, emabhizimusi madiki nepakati eBay anowanzo kuve akaiswa kunze kwemaguta makuru mune izvo zvavanodaidza "Nzvimbo dzevatengesi".
MuItaly, France neSpain, vatengesi vazhinji vari munzvimbo dziri mumahombekombe egungwa, nzvimbo dzinozivikanwa nekushanya uye kwete zvakanyanya kune bhizinesi, zvisinei, izvi zvinobvumidza nzvimbo dziri padyo negungwa kunakidzwa nekuwanda kwevanamuzvinabhizimusi. mabhenefiti eBay e-commerce.
Vashanu Spain yepamusoro eBay mutengesi hotspotsZvinoenderana nedhata rakaunganidzwa neiyo peji, nharaunda yeValencia ndeyekutanga, ichiteverwa neMadrid munzvimbo yechipiri, ichiteverwa neCatalonia, La Riojia neAsturias.
Imwe dhata inonakidza kwazvo yakapihwa neiyi eBay kutsvagisa ndiyo runyorwa rwezvinhu zvikuru zvinotengeswa pane ino e-commerce portal, nehuwandu muhuwandu. MuSpain, zvinhu zvinotengeswa zvakanyanya paBay ndezvemagetsi (28.1%), zvichiteverwa nezvipfeko, shangu uye zvishongedzo (26.8%), munzvimbo yechitatu zvinhu zvekumba nemubindu (18.5%) uye zvinopedzisira zviri zvishoma pasi pegumi % isu tine akaunganidzwa, mararamiro, zvikamu uye zvishongedzo, multimedia, uye bhizinesi uye maindasitiri zvinhu.
Huwandu hwekutengesa kwese mu eBay zvigadzirwa zvekutengesa gore rapfuura zvakazosvika inoshamisa $ 84 bhiriyoni gore rapfuura. Huwandu hwevashandisi vanoshanda pane eBay chikuva hwakamira pamamirioni 169 parizvino muna2017.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » nemitambo » Ndeapi makuru eBay ekutengesa mapoinzi muEurope?
Kuvanzika sekukosha mue-commerce
Chete 16% yevatengi vepamhepo vanopedzisira vatenga online